[Wondershare] Data Recovery - ကို Safe နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော Data Recovery Solutions
Flash ကို Drive ကို Recovery ကို
မှတ်ဉာဏ်ကဒ် Data Recovery
SSD ကို Data Recovery
အမှိုက်ပုံးထဲ Recovery ကို
SD ကဒ် Data Recovery
က MS နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြုပြင်ခြင်း
က MS Excel ကိုပြုပြင်ခြင်း
က MS PowerPoint ပြုပြင်ခြင်း
အီးမေးလ်ပို့ရန်ပြုပြင်ခြင်း & Recovery ကို
ဓာတ်ပုံ Recovery ကို
စာရွက်စာတမ်း Recovery ကို
Mac အတွက် Data Recovery
Windows အတွက် Data Recovery
Flash ကို Drive ကို
ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို Recovery ကို
သင့်ရဲ့ကို Safe & ယုံကြည်စိတ်ချရသော Data Recovery Software များ
သာဖတ်ရန်ကွန်ပျူတာများ, hard drive, Flash ကိုမောင်း, memory card, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ကင်မရာများကိုနှင့်တီဗွီကင်မရာအဘို့, အန္တရာယ်-အခမဲ့နှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော Data Recovery software ကို
"Wondershare Data Recovery ... ဖိုင်များကိုပြန်လည်နာလန်ထူဖို့နဲ့ရှာသောအရာကိုအမျိုးအစားများကိုဘယ်လိုများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်တန်ကိုထောက်ပံ့ပေး, ဒါကြောင့်သင်ကဖြစ်စဉ်ကိုချောမွေ့နှင့်သင်လျင်မြန်စွာရှာနေရလဒ်ကိုရနိုင်"
က CNET, တစ်ဦးဦးဆောင်နည်းပညာမီဒီယာကနေ
ကျနော်တို့ဖူး 5,000,000+ Data Recovery
ဖိုင်ကို system ကို NTFS, FAT16, FAT32 သို့မဟုတ် exFAT နှင့်အတူသိုလှောင်ရေးကိရိယာအမျိုးအစားအားလုံးကိုထောက်ခံနေကြသည်။
ကွန်ပျူတာ & Laptop ကို (Recyle Bin ကိုထည့်သွင်း)
floppy Disk ကို , disk, Zip , iPod (Nano, Classic & မွှေနှောက်) , ဆဲလ်ဖုန်း : Black က Berry ဟာ , Nokia က , Android ဖုန်း ... ကိုလည်းထောက်ခံနေကြတယ်
ကို DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT / PPTX, PDF ဖိုင်ရယူရန်, CWK, HTML / HTM, INDD, EPS, etc
စသည်တို့ကို JPG, TIFF / TIF, PNG, BMP, GIF, PSD, CRW, CR2, NEF, ORF, RAF, SR2, MRW, DCR, WMF, DNG, ERF, RAW,
စသည်တို့ကို AIF / AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, လယ် / MIDI, OGG, AAC,
စသည်တို့ကို PST, DBX, EMLX,
ZIP ဖိုင်, RAR, ထိုင်နှင့်အခြားအသုံးဝင်သောဒေတာ။
အားလုံးမှာ Data ဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေထောက်ပံ့
မလျော်ကန်သော partition ကိုသို့မဟုတ် partition ကိုအမှား
ချပ် device ကို
backup လုပ်ထားစရာမလိုဘဲ factory reset
-install ပြတင်းပေါက် system သို့မဟုတ် hard disk ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျ
Mac OS X မှာ 10.13 (အမြင့် Sierra), 10.12 (Sierra), 10.11 (အယ်လ် Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, ဒါမှမဟုတ် 10.6
Hard Disk ကိုအာကာသ:
100 MB အထိနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အာကာသအထက်
100% ကို Safe နှင့်အလွယ်ဆုံး Data Recovery Software များ
Wondershare Data Recovery, လုံခြုံခြင်းနှင့်ထိရောက်သောဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ, သင့်ရဲ့ PC ရဲ့ hard drive ကိုအနေဖြင့်အဖြစ်ကို USB drives တွေကို, external hard drives တွေကနှင့်အခြားသိုလှောင်ရေးကိရိယာထဲကနေစသည်တို့ကိုသင့်ရဲ့ပျောက်ဗီဒီယိုများ, ဓာတ်ပုံများ, ဂီတ, စာရွက်စာတမ်းများ, အီးမေးလ်များ, ရယူ
preview ဆော့ဖ်ဝဲကိုတွေ့နှငျ့သငျ recover လုပ်ချင်သောသူမြားကိုရှေးခယျြဖိုင်တွေအားလုံးကို။
သင့်ရဲ့ disk ကိုတစ်ဦးနှံ့နှံ့စပ်စပ်ရှာဖွေရေးကိုဖွင့်ဖို့ Deep Scan ကိုသက်ဝင်စေပါ။
သင့်ရဲ့ပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကိုရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများအတွက်သင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ်သိုလှောင်ရေးကိရိယာထဲကနေ retrieve ။
... ကွန်ပျူတာ hard drive ကို, flash drive ကိုအမျိုးအစားအားလုံးကိုအပေါ်ဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူပြီးပို
အစွမ်းထက်စကင်ကိုဖန်ရှင်ကိုသင်လွယ်ကူမှာသင့်ရဲ့သိုလှောင်ရေးကိရိယာပေါ်မှာရှိသောတက byte ကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်နှင့်အဆင့်မြင့်ဖိုင်-ပြန်လည်နာလန်ထူ algorithm ကိုသငျသညျမိနစ်အတွင်းမှာဖျက်ပစ်ချပ်သို့မဟုတ်ပင်ပျက်စီးသွားသော file တွေကို restore လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
" " သူကဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ကြွလာသောအခါ Wondershare Data Recovery, ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုတော်တော်လေးထိရောက်အပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုအချိန် interface ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုမဆိုအမှားများကိုသို့မဟုတ်ပျက်ကျထုတ်ဖေါ်မကောင်းလှ၏။
3 မော်ဂျူးများအထူးကွဲပြားခြားနားသောဒေတာများဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေတွေများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ Scan ကိုရလဒ်များကိုသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်ဖိုင်ဆယ်တင်ရေးဘယ်အချိန်မဆိုဖွင့်ဖို့ programmer မှတင်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
" " Wondershare Data Recovery သင်သည်အရေးကြီးသောဖိုင်များကိုအဆုံးရှုံးခဲ့ရပြန်တတ်နိုင်သမျှရချင်တော့သည့်အခါအကောင်းတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာဖိုင်တွေရှာဖွေကိရိယာကောင်းတစ်ဦး set ကိုကမ်းလှမ်း, နှင့်၎င်း၏ Scan ဖတ်ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ထိထိရောက်ရောက် run ။
ရိုးရှင်းစွာအအားလုံးသည်အခြေအနေများ, အဘယ်သူမျှမ Tech မှလိုအပ်ပါသည်သည်
ကွန်ပျူတာပျက်ကျခဲ့? အရေးကြီးဖိုင်များအားဖျက်သိမ်းပြီး? မှားယွင်းစွာချပ်? အခုဆိုရင်ထိတ်လန့်စရာလိုအပ်နေသောူပည်သူ!
partition Recovery ကို
မဖျက်ပစ်သို့မဟုတ်မှားယွင်းစွာ partition ကို format လုပ်ဘို့ဒေတာကိုအရှုံး? ဖျက်ပစ်သို့မဟုတ်ချပ်များနှင့်ပင်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဝှက်ထား partitions ကိုကနေခဲ့ကြကြောင်း partitions ကိုမှာသိမ်းထားတဲ့ဒေတာကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
disk ကို / partitions ကိုပုံစံချ, မတော်တဆ partitions ကိုမဖျက်ပစ်ဘို့ data တွေကို Recover, ဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးသွားသောသို့မဟုတ်ဝှက်ထားသော partitions ကိုမှသည်။
ကြောင့် repartition, Boot တက်မန်နေဂျာမလျော်ကန်သောကိုယ်ပွားစနစ် restore, disk ကိုမတော်တဆထိခိုက်မှုစသည်တို့မှ partition အရှုံး
ကြောင့် disk ကို partition ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှုနဲ့ Hard drive ကိုစနစ်ပျက်ကျမှုသို့မဟုတ် Windows တပ်ဆင်အပေါ်ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုမှဒေတာများဆုံးရှုံးခြင်း။
မတော်တဆတစ်ခုခု backup လုပ်ထားစရာမလိုဘဲအရေးကြီးသောဖိုင်များကိုအဖျက်ပစ်နှငျ့ "Recycle Bin ကို" သွန်? အလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်ကို PC / Laptop ကို / ဆာဗာများနှင့်အခြားသိုလှောင်မှုမီဒီယာကနေပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ရုတ်တရက် Right-ကိုနှိပ်ခြင်းအား menu ကိုတို့ကဖိုင်တွေကိုပယ်ဖျက်သို့မဟုတ် 'ဖျက်ပစ်ပါ' 'ကိုနှိပ်ခြင်း။
backup လုပ်ထားစရာမလိုဘဲ to'Shift + Del '' ကြောင့် file ကိုအရှုံး။
Recycle Bin ကို emptying ကြောင့် file ကိုအရှုံး။
RAW Hard Drive Recovery ကို
များသောအားဖြင့် file system ကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်း, လက်လှမ်းမမှီဝှက်ထားသောသို့မဟုတ်ပြင်းထန်စွာကျင့်ပျက်ခြစားဒေတာ, ဒီအစွမ်းထက်ဒေတာဆယ်တင်ရေးဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ RAW hard drive ကို, RAW partition ကိုသို့မဟုတ် partition ကိုအရှုံး Restore ။
RAW သို့မဟုတ်အဖြစ်ဖော်ပြပေးသော RAW partition ကိုသို့မဟုတ် disk ကို '' မီဒီယာ / Drive ကို Format ချမထားဘူး, အခုသင် format ချင်ပါတယ်? '
မျှော်လင့်မထားတဲ့အာဏာကိုချွတ်, ဆော့ဖ်ဝဲပျက်ကျမှုများအတွက်ပြင်းထန်သောအကျင့်ပျက်ခြစားမှု, လျြော SD ကဒ်ထုတ်ဆွဲ, ဖြစ်စဉ်ကိုရေးသားနေစဉ်အတွင်းသိုလှောင်မှုမီဒီယာပိတ်ခြင်း။
device ကိုအစပိုင်းမှာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်ခံရ, မှတ်ဉာဏ် / SD ကဒ်အပါအဝင်အခြားကး။ '' Access Denied 'သို့မဟုတ်ကိုဖတ်ရှုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, မီဒီယာကဒ်အမှား, backup လုပ်ထားစရာမလိုဘဲစက်ပစ္စည်း၏စက်ရုံ setting ကိုစသည်တို့ကို
အဆိုပါဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကိုစတင်ရန်နှင့်သင် restore ချင်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒေတာအရှုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ရှိရာလမ်းကြောင်းကို / တည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ဆက်လက်ရန် "Next ကို" ကိုနှိပ်ပါ: သင့် Device ကို / ကွန်ပျူတာ scan လုပ်ပါ။
ရွေးချယ် Recovery ကို: ကို Preview, Recover နှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်ဖိုင်များ။
1. ကို Select လုပ်ပါ
2. Scan ကို
အကောင်းဆုံးဒေတာဆယ်တင်ရေး software ကို @affordable စျေးနှုန်း ... ရုံ3နာရီ 70 GB ကိုဒေတာ recover ... thanx Wondershare Data Recovery 4.8.3 မှစာရေးတံ ချ. ဝေ!
Arun Bhave, Nashik, အိန္ဒိယများက
ဤသည်ငါ့ကိုတကယ်အရေးကြီးသောမှတ်စု recover နှင့်အခမဲ့အစမ်းအဘို့အကူညီပေးခဲ့သည်! ကိုယ့်နိုင်အောင်မေလအရပ်တွင်ကြိုးစားခဲ့နှင့်ဤရုံ soo အများကြီးငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဒီဆော့ဗ်ဝဲ AT & T စတိုးဆိုင်မဟုတ်တတျနိုငျသသောငါ၏အန်းဒရွိုက်ဖုန်းမှငါ့ data တွေကို recover နိုင်ခဲ့သည် !! အဆိုပါဒေတာ disc ကို corupt ဆည်းပူးခဲ့သောနှင့်ဤဆော့ဖ်ဝဲကိုနေ့ကို 3000+ မြေးဓါတ်ပုံတွေကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏,
မိုက်ကယ် Potter အားဖြင့်
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် & သိုလှောင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အပြီးအစီး Recovery ကို Software များ
Windows ကို မက်
Recycle Bin ကနေပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကိုပြန်လည်ဆယ်တင်နည်း
အလွယ်တကူ PowerPoint ဖိုင်တွေကို Recover နှစ်ခုနည်းလမ်းများ
SATA Hard Drive မှဒေတာများပြန်လည်ဆယ်တင်နည်း
NTFS ခက် Drive မှပျောက်ဆုံးသွားသောမှာ Data Recover လုပ်နည်း
WD Hard Disk ကိုကိုမှအချက်အလက်များကို Recover လုပ်နည်း
Format ဖိုင်တွေကို Recovery ကို
အားဖျက်သိမ်းပြီးအီးမေးလ်များ Recover လုပ်နည်း
တစ်ဦးကို USB Drive မှပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကိုပြန်လည်ဆယ်တင်နည်း
YouTube ကို Downloader
•ငါဖိုင်တွေအချိန်ကြာမြင့်စွာလွန်ခဲ့တဲ့ဖျက်ပစ် recover နိုင်သလား?
အကယ်စင်စစ်သင်သည်နေသမျှကာလပတ်လုံးမူရင်းပျောက်ဆုံးဒေတာအချက်အလက်အသစ်ကိုစနစ်နဲ့ overwrite လုပ်မဲ့နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေအဖြစ်မသက်ဆိုင်သည့်အချိန်ကာလသည်သင်၏ဖျက်ပစ် data တွေကို recover လို့ရပါတယ်။
•ငါ Wondershare Data Recovery ၏အခမဲ့အစမ်းနှငျ့အဘယျအရပါသလဲ?
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုဗားရှင်းအပြည့်အဝဗားရှင်းအပေါငျးတို့သ features တွေရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပြန်ဆယ်တင်လို့ရတဲ့ဖိုင်တွေကိုစုစုပေါင်းအရွယ်အစား 300MB (Windows ဗားရှင်း) မှာအဖြစ်သို့ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝဗားရှင်းမန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။
သင် "အခမဲ့စမ်းသပ် on" ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးဗားရှင်းနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်ပါ။
အပြည့်အဝဗားရှင်းမထိုကဲ့သို့သောန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ သငျသညျဆော့ဖ်ဝဲကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်အခါ, သင်သည်မည်သည့်န့်အသတ်မရှိပါဘူးသောအပြည့်အဝဗားရှင်းကသော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုအမေရိကန်ပြင်ပကနေ datarecovery.wondershare.com သွားရောက်လည်ပတ်ပါသလား?
ပိုပြီးသက်ဆိုင်ရာစျေးနှုန်း, ပရိုမိုးရှင်းများနှင့်ဖြစ်ရပ်များအဘို့သင့်ဒေသဆိုင်ရာ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။
: သို့ကူးပြောင်း တရုတ် အင်္ဂလိပ်
Recycle Bin ကို Recovery ကို